iPhone Video Converter - Beddelaan Video inay iPhone New 5 iyo All iPhone
Sida loo Beddelaan AVI / MP4 / MKV / wmv / DIVX / FLV si iPhone (6 / 6s mid)
Haddii aadan ka ciyaari kara filimada on iPhone, aad u baahan tahay si ay u daryeelaan oo ku saabsan 3 wax, ka qaabab video iPhone taageeray, encoders video, iyo iPhone tilmaan farsameed. Haddii mid ka mid ah 3 uusan aadin aad iPhone, aad uma ciyaari karo video ah oo si guul ah ku iPhone. Maqaalkani waxa uu ogsoon tahay marayso iyo inay xal u sahlan in aad iPhone arrinta video loo maqli karo qaar ka mid ah video xirfad converters.
Qeybta 1: 3 Online iPhone Video converters
Qeybta 2: Workaround - 8 Desktop Video converters
Qeybta 3: iPhone taageerayaan Files
Qeybta 4: Su'aalaha ku saabsan ciyaaro Videos on iPhone
2. Online-diinta (Online video Converter)
Waxaad isticmaali kartaa Online-diinta si lacag la'aan ah loogu badalo files online. Faa'iidada la isticmaalayo internetka iPhone video Converter waa in aadan u baahan inaad ku rakibi ah software-saddexaad on your computer, oo ka heli kartaa macluumaad dhab ah oo aad u haboon. Si kastaba ha ahaatee, xawaaraha ay diinta la barbar dhigi karaa uma leh Converter desktop video. Waxa aad qaadan kartaa saacadood dhammayn diinta file weyn.
Zamzar waa mid aad loo jecel yahay iPhone online video Converter ah. Kaliya in aad soo dhoofsadaan kartaa file, ka dibna dhigay qaabab wax soo saarka sida iPhone, ama MP4 iyo MOV. Ugu dambeyntii, waxa aad bilaabi kartaa si loogu badalo. Mid ka mid ah wax aad u baahan tahay in la ogaado waa in aad file isha waa in uu ahaado in ka yar 100 MB iyo xawaaraha diinta ka wuxuu noqon karaa mid aad u gaabis ah.
Qeybta 2: Workaround - 8 Desktop Video converters inay Beddelaan kasta Video ku Mac / Windows si iPhone Video qaabab
1. gacan-jabis (Windows & Mac)
Si loogu badalo filimada si iPhone, waxaad u bilaabi kartaa gacan-jabis by doorashada horena ah filaayo in iPhone, ama kaliya dhigay qaab wax soo saarka sida MP4, H.264 ama MPEG-4. Markaas waxaad ku raaxaysan karaan diinta ka tayo sare leh xawaare degdeg ah.
Tani iPhone video Converter taageertaa diinta videos in MP4 (.M4V) iyo .MKV. Iyo video ah encoders taageeray waa H.264 (x264), MPEG-4 iyo MPEG-2 (libav), iwm Waxaad si fudud u bedeli karaan wax video inay iPhone (iPhone 5s / 5c / 5 ka mid) on Mac iyo Windows.
Waa qalabeed ah oo diinta video xirfadeed oo dhammaystiran la shaqo ee diinta, tafatir, duuban, DVD gubanaya, qoraalana iyo in ka badan. Muuqaalada Key waa:
Beddelaan AVI, MP4, MOV, Mpg, MKV, wmv, Divx oo dheeraad ah si ay u iPhone (iPhone 5s / 5c / 5 ka mid).
Presets filaayo in qalabka Apple nadaam iPhone iyo iPad kala duwan, sida iPhone 5 (s), iPhone 4, iPad Air, iwm
Videos Edit sida QuickTime Pro by falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm
Download videos ka Netflix, YouTube, Facebook, iwm xawaare ugu dhaqsiyaha badan.
Iibsiga files gediyay via WiFi.
MPEG StreamClip waa cross-madal iPhone video Converter, ciyaaryahanka, iyo editor labada Windows iyo Mac. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo MPEG, VOB, mod, MOV, AVI, MP4, TS, M2T, iyo ka badan si aad iPhone (waxaa ka mid ah 5s / 5c / 5) oo ay taageerayaan qaabab la presets dhisay-in. Ka sokow, waxaad isticmaali kartaa this video iPhone Converter in xaalkaa aad video la Goo, Copy, koollada, iyo jar. Arrinta kale waxa weeye in MPEG StreamClip sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad ka YouTube iyo Google download videos.
Video Converter Free Waa iPhone video Converter kale oo taageero qaab ballaaran. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo ku dhowaad file kasta oo aad iPhone waayo-aragnimo fiican loo maqli karo. Tusaale ahaan, waxaad u bedeli karaan AVI si iPhone, MP4 si iPhone, MKV si iPhone, MOV si iPhone, wmv si iPhone, Divx si iPhone, Mpg si iPhone, VOB si iPhone oo dheeraad ah. Sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad kor loogu qaado videos leh hawlaha video tafatirka hodan.
Just dajiyaan mid ka mid ah videos sida AVI, MKV, MOV, MP4, iyo VOB si aad u iPhone this (waxaa ka mid ah 5s / 5c / 5) video Converter, ka dibna dooro ikhtiyaarka ah "filaayo in iPod", ka dibna riix "Beddelaan" button . Waxaad ku dhameysan kartaa diinta video ee geedi socodka deg deg ah. Sidoo kale tani iPhone video Converter taageertaa Dufcaddii video coversion.
Qaabab ay taageerayaan: .mov .mp4 .avi .dv .mpg .vob .3gp .asf .wmv .flv .m4v
6. AHV Video Converter (Windows)
Waxaad ka faa'iidaysan karaan wax badan oo ka awood badan taasi iPhone video Converter. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo AVI si iPhone, MP4 si iPhone, MOV si iPhone, wmv si iPhone, MKV si iPhone, Mpg si iPhone, VOB si iPhone, M4V si iPhone, regelingen si iPhone, WMA si iPhone, iwm Sidoo kale waxaad u bedeli karaan qalabka la presets filaayo in sida iPhone, iPad, iPod ama aad videos.
Sidoo kale waxa ay leedahay qaababka kale. Waxaad u isticmaali kartaa si ay u maareeyaan videos HD-Camera, iyagoo u beddelaya mid ka mid ah qaababka aad u jeclaystay, la abuuro DVDs, iyo wadaagno videos in web, iwm
Freemake video Converter ayaa interface aad u cad oo fudud. Waxa ay taageertaa diinta videos in qaabab iyo qalab kala duwan. Waxaad dajiyaan karaa 200+ qaabab aqbasho, video, audio, DVD, ama sawir in this video iPhone Converter. Ka dibna waxaad si iPod, iPhone, iPad, PSP ama Android badalo kartaa video files. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad xaalkaa videos, download videos ama aad slideshow photo.
8. Qaabka Factory (Windows)
Waa iPhone video ka mid ah dad badan oo isticmaala Windows Converter ah aad loo jecel yahay. Waxaa u bedeli karaan oo dhan video iyo files audio in qalab mobile (iPhone, iPad, ama Android), Console (PS3, Madaxweyne Siilaanyo iyo 360 PSP) ama DVD gubanaya for loo maqli shaashad weyn. Waxaa badasha MP4 oo dhan, FLV, AVI, MKV, M4V, regelingen, MP3, WMA, iwm files si iPhone. Dhamaan qaababka ugu waaweyn ee ay taageeraan. Sidoo kale waxa aad ogolaanaysaa music kala ka filimada.
I. taageerayaan iPhone Video Files
iPhone taageerayaan Video Formast MOV, MP4, M4V
iPhone aqlka Video qaabab AVI, FLV, Mpg, MPEG, wmv, 3GP, VOB, MTS, MKV, 3G2, 3GPP, TS, TP, TRP, M2TS, DV, mod, ASF, DAT, F4V, dhexena, RMVB, Divx, OGV, VRO, MXF.
iPhone taageerayaan Video Encoders H.264, MPEG 4-
iPhone taageerayaan farsamada khaaska
H.264 video ilaa 720p, 30 looxyada halkii labaad, heerka Profile Main 3.1
Audio: ilaa AAC-LC 160 Kbps, 48kHz, rikoodh
MPEG-4 video, ilaa 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 looxyada halkii labaad, Simple Profile
Audio: ilaa AAC-LC 160 Kbps per channel, 48kHz, rikoodh
The files aqbasho video taageeray for loo maqli karo ee mobiilka iPhone ama aad kala duwan sida iPhone 5S, 5C, 5, 4s, iyo 4 waa sida hoos ku qoran:
M4V, MP4 iyo weelasha MOV la H.264 video codec iyo AAC codec audio,
M4V, MP4 iyo weelasha MOV la MPEG-4 video codec iyo AAC codec audio,
Weelasha AVI la video M-jpeg ka codec iyo PCM codec audio,
Weelasha AVI la video M-jpeg ka codec iyo ulaw codec audio.
II. Best Video Meeshay u Noocyada kala duwan ee iPhone 5S, 5C, 5, 4s, iyo 4
Weelka MP4 la codec video iyo AAC codec H.264 waa goob video ugu fiican. Fadlan wixii faahfaahin dheeraad ah si ay u goobaha kale ee soo socda:
Resolution: 1136 * 640 (for iPhone 5S / 5C / 5), 960 * 640 (for iPhone 4s / 4)
Rate Inyar: 2500 kbps
Haddii video aan iPhone taageeray ama aad tahay qof hubin video ah goob ugu fiican ee aad iPhone (5S / 5 / 4s / 4 ka mid ah), waxaad isticmaali kartaa Converter video ah si ay u xaliyaan dhibaatada. Iyada oo hoos ku Converter video ah, waxaad si fudud u dooran kartaa qaabka wax soo saarka horena u qalab aad oo aan haysan si ay ula qabsadaan goob video ee gacanta.
Qeybta 4: Su'aalaha ku saabsan ciyaaro Videos on iPhone (waxaa ka mid ah 5s / 5c / 5)
1. Waa maxay sababta aan daawan kartaa filimada (MP4, AVI, MKV, MOV, M4V, FLV, Mpg, iwm) on iPhone
iPhone taageertaa video in MP4, MOV, qaabab M4V in H.264, ama MPEG-4 codec. Haddii aad movie waa in iPhone qaab ay taageerayaan, waxa laga yaabaa in weli aan la soo ciyaaray oo ay iPhone. The farsamada khaaska iPhone sidoo kale u baahan in la tixgeliyo. Waxaad isticmaali kartaa iPhone video Converter la presets wax soo saarka si fudud loogu badalo video inay iPhone (iPhone 5s / 5c / 5 ka mid) on Mac iyo Windows.
2. Waa maxay sababta aan daawan karin video la browser web (Safari, Chrome, ama Firefox) on iPad
Inta badan videos gundhig ugu yahay web tahay flash videos. iPhone ma taageeri ciyaaro flash video. Laakiin waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah Flash Player daalacashaduna si uu u daawado flash videos, sida Puffin browser, Photon Flash player, ama Skyfire web browser.
3. ma ciyaari karaa YouTube video at 360p ama 480p
iPhone taageerada ciyaaro videos at 720p. Waxaad sameyn kartaa video ah oo tayo leh ka doorteen in ay 720p hoos goobaha video loo maqli karo.
Sida loo badalo AVCHD la FFmpeg?
Sida loo badalo AVCHD in MOV
Video Converter for Windows 8: Beddelaan Videos in qaab kasta oo
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Video inay iPhone